स्लमडगकी स्टार बिक्रीमा...!! - International News - Bridge to Nepal & Nepali
Topic: स्लमडगकी स्टार बिक्रीमा...!!
Author Topic: स्लमडगकी स्टार बिक्रीमा...!! (Read 1080 times)
स्लमडगकी स्टार बिक्रीमा...!!
« on: April 20, 2009, 02:20:09 PM »
गरिबीले ग्रस्त एउटा बाबुले करोडपति बन्ने योजना बनायो, चिठ्ठा जितेर होइन, छोरी बेचेर । आफ्नै बाबुबाट बेचिन लागेकी ती अभागी छोरी हुन्, ओस्कार विजेता स्लमडग मिलेनियर (झुपडपट्टीको करोडपति) की बालकलाकार रुबिना अली ।
नौ वर्षीया रुबिनाले सिनेमा खेलेर डेढ लाख पारिश्रमिक पाएकी थिइन् । यति धेरै पैसा एकैपटक कहिल्यै नदेखका बाबु रफिक कुरैसीलाई एकैपटक करोडपति बन्ने लहड जाग्यो । त्यसैले छोरीलाई दुई करोड भारुमा बेच्न तयार भए ।
रुबिना मुख्य कलाकार भएको स्लमडग मिलेनियरले यस वर्ष ओस्कारका आठ विधामा पुरस्कार जितेको थियो । भारतीय झुपडपट्टीको चरम गरिबीको तस्बिर खिचेको सिनेमा सुपरहिट भयो, रुबिनाजस्ता कलाकार स्टार भए । तर, बाबुले परीजस्ती छोरीको भविष्य पर्खिएनन्, आफ्नै वर्तमान चम्काउन खोजे ।
लन्डनको द न्युज अफ द वल्र्ड वेबसाइटका छद्मभेषी पत्रकार अरबी शेख बनेर मुम्बई आए । उनले रफिकसँग रुबिनालाई धर्मपुत्री बनाउने प्रस्ताव राखे । उसैको सुन्दर भविष्यका लागि भन्दै रुबिनालाई सुम्पन तयार भए बाबु, तर यसका लागि उनले दुई करोड भारु मागे ।
रफिकले छोरीको मूल्यबारे छद्मभेषी पत्रकारसँग जमेरै मोलमोलाइ गरे । तर, उनले यो 'स्टिङ अपरेसन' हो, क्यामेराले खिचिरहेको छ भन्ने पत्तो नै पाएनन् । 'मैले छोरीको भविष्य हेर्नु छ, अनि आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि सुधार्नु छ । त्यसैले दुई करोड त चाहिन्छ,' उनको भनाइ क्यामेरामा कैद छ ।
मूल्य तोक्नुअघि रफिकले सानो भूमिका पनि बाँधेका छन् । 'सिनेमा त हिट भयो, रुबिना पनि स्टार भई, तर हाम्रो परिवारले केही पाएन,' चर्को स्वरमा यति भनेपछि उनले सुस्तरी भनेका छन्, 'तपाईं लग्नुहुन्छ भने दुई करोड त चाहिन्छ नै !'
बालिकाको मूल्य सुनेपछि नक्कली शेखले अलिक हच्किएको अभिनय गरेका छन् । रफिकसँगै बसेका उनका भाइ सम्झाउन खोज्दै छन्, 'केटी पनि त चानचुने होइन, यो त ओस्कार स्टार हो, त्यति पैसा त के धेरै भयो र ?'
झुपडपट्टीको त्यो विवश बाबुको 'स्टिङ अपरेसन' गर्ने योजना हामीले बनाएका होइनौँ । तर, जब रफिकले छोरी रुबिनालाई धर्मपुत्रीका रूपमा कसैलाई बेच्दै छन् भन्ने सूचना आयो, हामीले पहिलो ग्राहकले भन्दा धेरै पैसा दिने आश्वासन दिएर वास्तविकता पर्दाफास गर्ने योजना बनायौँ ।
चुलबुले केटीका रूपमा पर्दामा आएर कोठीमा बन्धक बनाइएकी रुबिना (सिनेमामा लतिका) ले लाखौँ दर्शकको मुटु जितिन् । तर, यसले उनको भविष्य सुन्दर बनाएको छैन, मूल्य मात्र बढाएछ ।
हाम्रो स्रोतका अनुसार एक अरबी परिवारले रुबिनालाई किन्ने निश्चित जस्तै भएको थियो । स्लमडग मिलेनियरको सफलतापछि रुबिना र अन्य बालकलाकारको जीवनमा आधारित न्युज रिपोर्ट अल जजिराले प्रसार गरेको थियो । सुन्दर र चुलबुले रुबिनाले अरबी परिवारलाई यति आकषिर्त गरिन्, उनीहरू करोड रुपैयाँ तिरेरै भए पनि धर्मपुत्रीका रूपमा किन्न तयार भए ।
तर, जब हामीले पनि प्रस्ताव राख्यौँ, उनीहरू हामीसँग पनि 'बिजनेस' गर्न तत्कालै तयार भए । रुबिनाका बाबु र मामा पैसाका लागि यति आतुर थिए, उनीहरू हाम्रो पृष्ठभूमि, नियत र नामसमेत नसोधी बालिकाको अन्तिम कारोबार गर्न तयार भए । एउटी स्टार बालिका, तर वस्तुभन्दा पनि सस्तो कारोबार ! हामी आश्चर्यमा पर्‍यौँ ।
यो सत्य हो, भारतीय झुपडपट्टीका धेरै बालिका बेचिएर अरब पुग्छन् । त्यहाँ कतिले महलमा राजकुमारी बन्न पाउँछन्, कतिले ऊँटले जस्तै बालुवामा श्रम गर्नुपर्छ । अझ कति त घरमा यौनदासीका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । तर, अचम्म, रुबिनाका बाबुले त्यस्तो कुनै आशंका र चिन्ता व्यक्त गरेनन् ।
साँझमा भेट्ने योजना थियो, तर उनी निक्कै ढिला आए । मुम्बईको लक्जरिअस होटल लीला केम्पिन्स्कीमा उनी राति ११:३५ मा आइपुगे । साथमा थिइन् रुबिना, यो समयमा त रुबिनाको उमेरका बालबालिका निदाइसकेका हुन्छन् । तर, उनी आफू बेचिने कारोबारको साक्षी बन्न होटलसम्म आइपुगेकी थिइन् ।
रफिकले जेठान मात्र होइन, भाइ र अरू साथीलाई पनि लिएर आएका थिए । उनीहरू धेरैबेरसम्म होटलको सजावट र बनोटमा ध्यान दिइरहेका थिए । यति ठूलो, यति राम्रो होटल बन्यो होला आखिर कसरी भनेर बिचराहरू गहिरो सोचमा थिए । यो स्वाभाविक पनि थियो, जब कि झुपडपट्टीबाट उठेर उनीहरू एकैपटक लक्जरिअस होटलको स्विटमा आएका थिए, जसका लागि हामीले रातको ५० हजार भारतीय रुपैयाँ तिरेका थियौँ ।
अनौठो ठाउँमा रुबिना पनि छक्क परेकी थिइन् । 'अंकल, तपाईंको ट्वाइलेट त मेरो घरभन्दा पनि ठूलो रहेछ,' उनले मुख फोरिन्, 'हाम्रो घरमा एउटा मात्र कोठा छ, सातजना त्यहीँ सुत्छौँ ।'
'के खान्छ्यौ ?' हामीले प्रस्ताव राख्नासाथ उनले भनिन्, 'आइसक्रिम ।'
स्लमडग मिलेनियरबाट रुबिनाले डेढ लाख रुपैयाँ भारु पाएकी थिइन् । जसबाट रफिकले आफ्नो खुट्टाको उपचार गराए, एउटा मोबाइल किने, पुरानो ऋण पनि तिरे । रुबिना बिचरी भन्दै थिइन्, 'मैले त एउटा खेलौना पनि पाइनँ ।'
सिनेमाका निर्माताले घोषणा गरेका छन्, रुबिना र उनका सहकर्मी कलाकारका लागि एउटा करोडभन्दा बढीको घर पनि किनिसकिएको छ । तर, रफिकले सीधै भने, 'त्यो उनीहरूको गफ मात्रै हो, घर पनि केरलामा हो भन्छन्, म त मुम्बई छाडेर कहीँ पनि जानेवाला छैन ।'
रुबिनाका लागि उनीहरूले मूल्य लगाए, दुई करोड भारु । यो रकम धेरै होइन भनेर पनि उनीहरू हामीलाई 'कन्भिन्स' पनि गरिरहेका थिए ।
तर, छोरी हामी लग्दै छौँ, तपाईंको मनमा केही त होला ? हामीले डर देखाउँदा रफिक भन्दै थिए, 'होइन, होइन, त्यस्तो केही छैन ।'
हामीले भन्यौँ, 'रुबिनाबाहेक एकजना अर्को बच्चा पनि लिन चाहन्छौँ ।' उनीहरूबाट उम्कने यो नै उत्तम उपाय थियो । हामीले उनीहरूसँगको वार्तालाप सब रेकर्ड गरेका थियौँ । उनीहरू कारोबार फत्ते भयो, अर्को बच्चाबाट थप पैसा आउँछ भनेर खुसी थिए । उनीहरूले हामीलाई झुपडपट्टीका धेरै बच्चा देखाए । बिक्रीका लागि बालबालिकाको परेड नै खेलाए उनीहरूले ।
तेस्रो दिन रुबिनाका मामाले फोन गरे, 'के तपाईंहरूले निर्णय गरिसक्नुभयो, रुबिनाबाहेक अर्को बच्चा छान्नुभयो ?'
'तपाईंलाई हामी एकैछिनमा फोन गर्छौं,' यति भनेर हामीले फोन राख्यौँ । एकैछिनपछि फोन लगायौँ, तर रुबिनाका बाबुलाई होइन, सेभ द चिल्ड्रेनको कार्यालयमा ।
झुपडपट्टीका बालबालिकालाई कसरी बेचिन्छ ? हामीले विस्तृत प्रमाण सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिएका छौँ । आगे, उसैको जिम्मा !
Re: स्लमडगकी स्टार बिक्रीमा...!!
« Reply #1 on: April 20, 2009, 02:27:15 PM »
yo lekh padhdaa feri ek patak slumdog heryaa jastai lagyo
« Reply #2 on: April 20, 2009, 02:30:17 PM »
film yaha po reicha ni hai
« Reply #3 on: April 20, 2009, 02:44:10 PM »
भन्छन नि ....
बिराली बिराली तिमी कहाँ गाकी थ्यौ
रानीलाई भेट्न लण्डन गाकी थे
बिराली बिराली तिमीले त्यहाँ के देख्यौ
कुर्सी मुनीको मुसोलाई म्याउ गरि तर्साएं ।
...वास्तवमा मान्छेको भावना यसरी नै छर्लङ्ग हुन्छ , पैसाले मान्छेलाई आँखा सहितको अन्धो बनाएको हुन्छ । झुपडिको बाबाले आफ्नो छोरीमा भएको कलालाई चिन्न सकेनन , यो एउटा गरिबीको उदाहरण पनि हो अनि मान्छे जुन अवस्थामा छ उसले त्यो भन्दा अगाडिको बारेमा सोच्न र देख्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
« Reply #4 on: April 20, 2009, 02:45:40 PM »
kali le sahi vanyo tara kala le usko babu lai khana diyena ni
aba kala le hollywood bollywood star lai khana diyo hola tara uni haru taa ajai pani garip nai chan ni haina ra
« Reply #5 on: April 20, 2009, 02:51:02 PM »
खै मलाई त केही भन्नै आएन , यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अचेल को युग नै अन्धो भएको छ । कहिले छोराछोरी ठूला होलान र बिदेश पठाम्ला अनि सुख काटेर बसम्ला भन्ने सपना धेरै आमा बाबुहरुले देखेको देख्छु । जानी जानी मान्छे हरु आफूलाई कता तिर धकेली रहेको छ भन्ने कुरा शायद आफैलाई नि थाहा हुँदैन ।
« Reply #6 on: April 20, 2009, 02:58:40 PM »
kali ko kura ek had samman sahi ho
aba huna taa hami nepali ni wa vannu parda hami south asian haru nai tyastai chau
bidesh janai parne
nepal maa j sukai gare ni bidesh ekpalta gaye pachi tyo manche lai koi le alik manyata diyeko pauchu samaj ma
mero dherai afanta chan dherai sathi tole chimek maa dherai jana bidesh gayeko chan
jo manche bidesh gayo kai garna nasake pani saab ko akha ko tara vayera basna payeko cha
tara kati manche haru bidesh nagai yaha afno kaam gareko haru ni chan tara uni haru le samaj ko lagi desh ko lagi dherai gareko chan tara uni haru ko kunai manyata chaina
aba afnai sochau naa hami hamro nai chora chori bidesh jahos vanne cahana cha ani hami nai barambar bidesh jana cahaanchau aru lai k dosh dine ra
« Reply #7 on: April 20, 2009, 06:45:35 PM »
tehi ho....chahana garibi, vivashata ani aparaadha............
sachchai vannu parda maile ta videsh gaako manchhe lai kahilye thulo darja ma rakhina...afnai desh maa mehanat le bacheko manchhe malai mann par6a.
« Reply #8 on: April 23, 2009, 03:38:00 PM »
maile ek patak kantipur patrika ma padeko thiye
yo padda ta sachikai herna man lagyo maile hereko chaina
« Reply #9 on: April 27, 2009, 10:06:59 AM »
Quote from: काली on April 20, 2009, 02:44:10 PM
Hoooo ba hoo... kali lae chae babal bhanchin bhanae ko ....